I-China Double iron indlebe yabalingisi bensimbi abawina umklomelo wamachashazi abomvu waseJalimane Ukukhiqiza neFektri | ISANXIA
Ama-double iron iron cast iron skillets awina umklomelo wamachashazi abomvu waseJalimane
Incazelo:Φ280 * 55mm
Isitayela sokubukeka sebhodwe:Ungakhetha phansi okuyisicaba noma okuyindingilizi, ngomlomo noma ngaphandle kombhobho, isibambo sokuphatha, njll
Lawa ma-iron-skillet angenza zonke izinhlobo zokudla, njenge-salmon ethosiwe, imfanzi ethosiwe, ama-noodle athosiwe, ama-pancake e-crispy, i-tofu ethosiwe njalonjalo. Ayinakho ukumbozwa kwamakhemikhali, kepha naka ukunakekelwa lapho usebenzisa. Kungaba nomphumela omuhle kakhulu wokungasebenzi. Inempilo futhi ihlala isikhathi eside kunembiza engeyona induku. Ingasetshenziswa isikhathi eside ngokusetshenziswa ngokucophelela. Ithandwa kakhulu ngabomama basemakhaya.
Impilo ngaphandle kokumboza ngamakhemikhali ingenye yezinzuzo zayo. Futhi inobubanzi obukhulu obungu-28cm, obungenza ukudla okuningi ngasikhathi sinye futhi kuhlangane nokusetshenziswa kwabantu abangu-4-6. Iphansi lalo liyajiya, ngaleyo ndlela kwakheke phansi okujiyile nodonga oluncane. Insimbi eyinhlanganisela inesilinganiso segolide sokuqhuba ukushisa. Lapho kufudunyezwa, ukuqhutshwa kokushisa kungashesha futhi kufane kakhulu.
Ukufakwa kokushisa okuhle kakhulu namandla okugcina ukushisa kungenza ukudla kube mnandi futhi kube nomsoco. Ngasikhathi sinye, noma ngabe umlilo omkhulu noma umlilo omncane, ungabamba ukushisa kahle, ukuze ukudla kungabi lula ukunamathisela imbiza, ngisho nabaqalayo bangawulawula kahle umlilo, ukupheka akusaphuthumi.
Umzimba webhodwe usebenzisa inqubo entsha yokwelashwa kokushisa kwe-nitriding (smothering stainless Technology). Ngemuva kokucima nokupholisa okuphezulu, ukuqina kobuso bebhodwe kuyathuthukiswa, ikhwalithi yomzimba webhodlela ithuthuke kakhulu, futhi nekhono lokulwa nokugqwala liyathuthukiswa.
Imininingwane design kanye ngokwezifiso
Kunezinhlobo ezimbili zesembozo ongakhetha kuzo, enye eyodwa ongayikhetha, enye inkululeko eyengeziwe. Uhlobo lokuqala lwesembozo isivalo sengilazi esiqinile, esimelana nokushisa futhi esihlala isikhathi eside. Ungabona inqubekela phambili yokupheka kokudla ngesivalo. Isembozo sesibili senziwe ngeCunninghamia lanceolata, esilula nesibukhali ngokubukeka, singavimbela ngempumelelo ukushisa, sinomphumela omuhle wokuvikela ukushisa, futhi siqinile ekuthungeni, akulula ukuqhekeka futhi akulula ukubanjwa ukonakala.
Ngezansi kwebhodlela kubushelelezi futhi kungasetshenziswa ezitofini ezahlukahlukene. Izindlebe ezimbili zensimbi zenzelwe ukuba zikhulu kakhulu. Kuyinto elula kakhulu ukuyisebenzisa ngama-anti scald gloves, futhi kuphephile ukuyibamba.
Langaphambilini Ihhavini laseDashi elinempilo linekhono lokupheka elihle kakhulu
Olandelayo: Isembozo se-pan yensimbi eyingqayizivele ingasetshenziswa njengepani lokuthosa
I-xtreme Iron Skillet, uNamel Skillet, I-Iron Iron Skillet, i-Cast Iron Skillet enamanzi, eqanjwe i-Cast Iron Skillets, i-Iron Iron Skillet engathinti,